Milaza Ny Mpanohitra Ao Borondia Fa Ny Vato ‘Eny’ Amin’ny Fitsapa-kevi-bahoaka Ihany No Ahafahana Manalava Ny Fitondran’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2018 4:01 GMT
Ny filohan'i Afrika Atsimo Jacob Zuma (havia) miaraka amin'ny filoha Pierre Nkurunziza (ankavanana) raha hitsidika an'i Borondia. 25 Febroary 2016. Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr GovernmentZA. CC BY-ND 2.0
Tamin'ny taona 2015, nahazo fe-potoam-piasàna fahatelo ny filohan'i Borondia, Pierre Nkurunziza, na dia teo aza ny lalàmpanorenana izay nazava tsara mikasika ny fe-potoana roa ihany. Niteraka hetsi-panoherana, fanonganam-panjakana tsy nahomby ary fanafihana fikomiana tsindraindray ny fandreseny mampiadihevitra, nitarika ny ankamaroan'ireo Borondey handositra ho mpitsoa-ponenana, ahitana ireo mpikambana ao amin'ny mpanohitra marobe, mpikatroka ary mpanao gazety.
Mitodika amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka, izay ho atao amin'ny volana May, mikasika ny fanovàna lalàm-panorenana ahafahan'i Nkurunziza mijanona eo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 2034 ankehitriny ny governemanta. Fantatra fa ho atao amin'ny taona 2020 ny fifidianana.
Ny fanitsiana dia ahafahan'ny filoha amperin'asa hahazo fe-potoam-piasana roa fanampiny, manitatra ny halavan'ny fe-potoam-piasan'ny filoham-pirenena avy amin'ny dimy ka mankany amin'ny fito taona, ary mampihena ny maro an'isa ao amin'ny parlemantera handaniana lalàna. Mety handràra ny fikambanan’ireo mpanao politika mahaleotena ihany koa izy ireo, fihetsika manan-danja, satria ny antoko tsy miankin'i Amizero y’Abarundi no mpanohitra lehibe tamin'ny taona 2015.
Mahita ireo mpitsikera fa toy ny fitambaran'ny ny ezaka ataon'ireo hiringiriny ao amin'ny antokon'ny fitondrana, tahaka an'i Nkurunziza ny volavolam-panitsiana sy ny fifidianana ho avy, mba hanamafisana ny fifehezana ny fanjakana. Tamin'ny alalan'ny taratasy, nitaky hetsiky ny iraisam-pirenena ireo antoko maro, ary niantso ny hanaovany ankivy sy hanakana ny tetikasa ny vondrona mpanohitra CNARED .
Na dia izany aza, nolavin'ireo manampahefana ho toy ny fanodinkodinan-tsaina izany, nilaza izy ireo fa hetsika demaokratika hanavaozana ny lalàm-panorenana izany.
Ankoatra izay, itarainan'ny mpanohitra ny fandrahonana sy ny fisamborana mba hanakanana ny fampielezan-kevitra ho fanohanana ny “tsia” amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka.
Tamin'ny taona 2014, tsy lany tao amin'ny parlemanta ny fanovana tahaka izany tamin'ny lalàm-panorenana tamin'ny taona 2005. Taorian'izay, nilaza ireo minisitra fa ny fe-potoam-piasan'i Nkurunziza voalohany, nanomboka ny taona 2005 ka hatramin'ny taona 2010, dia tsy tafiditra ao anatin'ny fetra fe-potoam-piasana roa ao amin'ny lalàmpanorenana satria voafidin'ireo mpanao lalàna tsy mivantana izy, fa tsy ny vahoaka, ary ny fe-potoana 2015-2020 no ho fe-potoam-piasany farany.
Nanaiky izany tamin'ny volana Mey 2015, talohan'ny fifidianana izay nandresen'i Nkurunziza tamin'ny vato efa ho 70% ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, voalaza fa niharan'ny faneriterena goavana – ka nandositra ny firenena ny filoha lefitr'izany Fitsarana izany, Sylvère Nimpagaritse.
Tamin'ny volana Ôktôbra 2017, nanambara ny hanaovana ity fitsapa-kevi-bahoaka ity ireo minisitra, nilaza fa ny fanovana dia tolo-kevitry ny vahoaka avy amin'ny fivoriana fifanakalozan-kevitra tantanin'ny governemanta. Na dia izany aza, niantso ireo fivoriana ireo ho “sarin'ady” manao boloky fotsiny ny fomba fijerin'ny manampahefana ny fikambanana «International Crisis Group» avy ao Belzika, izany dia noho ny “rivotry ny tahotra” nandritra ny fifanakalozan-kevitra ara-politika, araka ny nofariparitan'ny Human Rights Watch.
Tahaka ny mpanohitra maro, nanana teny masiaka ny mpitondratenin'ny CNARED, Pancrace Cimpaye. Nilaza izy fa mety manimba ny lalàmpanorenana sy ny Fifanarahan'i Arusha ny fanovana, fifanarahana izay manan-danja tamin'ny famaranana ny ady an-trano 1993-2005, saingy mbola isalasan’ ireo mpitarika ny antokon'ny fitondrana CNDD-FDD:
Ny fampahafantarana ny tetikasan'i Nkurunziza handevina ny Fifanarahan'i Arusha sy ny Lalàmpanorenana dia fihantsiana ady any amin'ny vahoaka Borondey. Iza no handresy: Nkurunziza sa ny vahoaka Borondey?
Mandritra izany, mbola tsy nahazo valiny ny fanontaniana fototra, tahaka ny mangarahara sy ny fampidirana ara-toekarena.
Mety ho tolona ny maha ara-dalàna ny fitsapa-kevi-bahoaka noho ny fizarazarana ara-diplaomatika misy ankehitriny, sy ny tsy fahombiazan'ny fifampidinihana , ary ireo Borondey 400.000 mbola any amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana (mitsipaka ny antontan'isan'ny sampan-draharaha misahana ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny Firenena Mikambana ireo miinisitry ny fanjakana, ary miampanga azy io ho fanodikodinan-tsaina).
Ankoatra izay, hatramin'ny taona 2015, tatitra marobe ihany koa no nandrakitra momba ny famonoana olona, fampijaliana sy herisetran'ny mpikomy, ary koa famoretana atao amin'ny mpanohitra sy ny media.
Tamin'ny volana desambra 2017, nampitandrina ny filoha Nkurunziza fa tsipika mena ny fanentanana na ny fihetsika manohitra ny tolo-kevitra alohan'ny vanim-potoanan'ny fanentanana, ary nilaza ny filoha lefitra Gaston Sindimwo fa mety “hiteraka korontana” izany. Ny fanentanan'ny governemanta amin'izao fotoana izao anefa, dia nofaritana fa “manazava” ny fanovana fotsiny.
Ny vanim-potoanan'ny fanentanana dia 14 andro mialoha ny fitsapa-kevi-bahoaka, ary ny fanentanana mialoha rehetra dia tsy ara-dalàna, hoy i Prosper Ntahorwamiye, mpitondratenin'ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI). Na izany aza, nilaza ihany koa izy fa tsy afaka manakana ny fampielezan-kevitra tokana ataon'ireo manampahefana amin'ny fifidianana ny “eny” alohan'ny vanim-potoana voatondro izy ireo.
Ary efa nanohana ny “eny” sahady ireo feo ofisialy, anisan'izany ny Minisitry ny Atitany, Thérence Ntahiraja, sy ilay mpisolovava, Edouard Nduwimana. Nitatitra ny SOS Médias Borondia, fikambanan'ny asa fanaovan-gazety “ambanin'ny tany”, fa nampitandrina manoloana ireo “mpanaratsy” sy nandrahona fisamborana ho an'ireo izay manao fanentanana ho an'ny “tsia” ny governora Gad Niyukuri .
Niampanga ny fanorisorenana mahery vaika atao amin'ireo mpanohana ny mpanohitra i Agathon Rwasa, filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena sady mpitarika ny mpanohitra. Raha ny marina, maro tamin'ireo mpanohana azy manokana no voasambotra, voampanga ho nanao fanentanana ho an'ny “tsia”. Tao amin'ny taratasy iray, nanakiana ny fanaratsiana amin'ny marika tahaka ny “manohitra ny fiandrianam-pirenena” ampiasaina hilazana ireo manohitra ny volavolam-panitsiana i Rwasa.
Tamin'ny 5 janoary, nanomboka fanentanana manohitra avy any an-tsesintany antsoina hoe “Teshwa ute”, izay adikan'ny gazety Iwacu hoe “atsaharo, aza sahisahy” ny firaisamonim-pirenena – izay samy nesorina, naato na tsy nankasitrahana avokoa tamin'ny fomba ofisialy tany Borondia, anisan'izany ny Aprodh, Ligue Iteka sy ny Focode. Nolavin'ny Minisiteran'ny Atitany ho tatitra lainga mifototra amin'ny fampahalalam-baovao diso izany.
Fanangonam-bola ifarimbonana sa fandraisana anjara noterena?
Fifandirana hafa, nanambara ny fitondrana tamin'ny volana Desambra 2017 fa misy ny “fandraisan'anjaran'ny” olom-pirenena amin'ny famatsiam-bola ny fifidianana – “fanangonam-bola ifarimbonana”, araka ny fanamarihan'ilay bilaogera Yaga, Alain Amrah Horutanga. Sokajiana fa an-tsitrapo izany, saingy napetraka arakaraky ny sokajin'ny asa ny vola fandraisan anjara, ary nantsoina ireo mpiasam-panjakana tsy afaka manampy amin'izany mba handefa taratasy fanazavana.
Ny Minisitry ny Atitany sy ny Fanabeazana Fitiavan-tanindrazana, Pascal Barandagiye, mampahafantatra amin'ny fomba ofisialy ny rafitra ara-dalàna mandrindra ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana 2020. Handray anjara araka ny sata misy azy ny olom-pirenena
Nilaza ilay mpanohitra Léonce Ngendakumana fa toa tsy maintsy atao izany, ary voalaza fa misy ny fandraisana anjara (ara-bola) ankaterena amin'ny fifidianana. Nanasonia taratasy manohitra ny drafitry ny governemanta haka ny “fandraisana anjara” mivantana amin'ny karama ireo sendikà.
Nisintaka tamin'ny fifidianana nampifaditra tamin'ny taona 2015 ireo mpanome fanampiana vahiny, ary nilaza ny filoha tamin'izany fa fanehoan-kerin'ny fahaleovantena ny famatsiam-bolan'ny tena ihany amin'ny fifidianana. Tonga izany kanefa mbola mamely amin'ny fiainana andavanandro ny tsy fandriampahalemana sy ny sazy, manomboka amin'ny fisondrotam-bidim-piainana hatramin'ny tsy fahampian'ny solika ary ny tetibola fitsitsian'ny fanjakana.
Na hetsika demaokratika fiandrianampirenana na fanamifasana ny fitondrana didy jadona, ny volavolam-panitsiana lalàmpanorenana sy ny fizotry ny fitsapa-kevi-bahoaka amin'izao fotoana izao dia mety hanamafy ny fisaratsarahana izay milaza ny tsy fandriampahalemana misy ankehitriny.